प्रहरीले नटेरे ‘इन्काउन्टर’ गर्ने विप्लबको चेतावनी : प्रहरी बिरुद्द पक्राउपुर्जी – Rapti Khabar
प्रहरीले नटेरे ‘इन्काउन्टर’ गर्ने विप्लबको चेतावनी : प्रहरी बिरुद्द पक्राउपुर्जी
टीकापुर : प्रहरीले देशभर नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइरहेका बेला कैलालीमा विप्लवको पार्टीले प्रहरीविरुद्ध नै ‘पक्राउ पुर्जी’ जारी गरेको छ। ‘जनअदालत’ को नाम दिएर नेकपाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक असईलाई ‘पक्राउ पुर्जी’ जारी गरेको हो।
कैलाली जनअदालत प्रमुख विकासको नामबाट शुक्रबार जारी पक्राउ पुर्जीमा राष्ट्रिय अनुसनधान विभागका असई भैरव कुँवरलाई ‘२५ दिनभित्र उपस्थित हुन’ भनिएको छ।
कुँवरको घर आसपास सार्वजनिक स्थानहरू टाँसिएको उक्त पुर्जीमा लेखिएको छ– ‘कैलालीको वर्दगोरीया गाउँपालिका–१ साझा भन्ने ठाउँमा बस्ने नवराज कुँवरका छोरा भैरव कुँवरलाई २५ दिनभित्र जनअदालतमा उपस्थित हुन पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो।’
अनुसन्धान विभागमा असई पदमा कार्यरत कुँवरमाथि नेकपाका नेता कार्यकर्ताको सुराकी, अपहरण र ज्यान मार्ने उद्योग गरेको आरोप लगाइएको छ। ‘बाटोका म्यादबाहेक २५ दिनभित्र आफैं वा पक्राउ पुर्जी बमोजिम पक्राउ परी यस अदालतमा हाजिर हुन आउनु होला’, उक्त पुर्जीमा उल्लेख छ।
चेतावनी पत्र र पक्राउ पुर्जी ।
असई कुँवरकाविरुद्ध नेकपाका कार्यकर्ता ‘तुफान’ ले अभियोग दर्ता गराएको र जनसरकार प्रमुख अनुकलले प्रतिवेदन बुझाएकाले सोहीका आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको नेकपाको दाबी छ।
आफैं वा पक्राउ परी आएमा जनअदालतले व्यवहार बुझेर जनअदालतको कानुनअनुसार कारवाही हुने उल्लेख छ।
तोकिएको म्यादमा उपस्थित नभएमा जुनसुकै कारबाही गर्ने चेतावनी नेकपाले दिएको छ। जनसुरक्षा विभागलाई जुनसुकै बेला पनि कारवाही गर्न आदेश दिइएको पक्राउ पूर्जीसँगै टाँसिएको ‘चेतावनी पत्र’ मा भनिएको छ।
‘म्याद गुजारी फरार रहेमा देश र जनताको हितविरुद्ध नेता कार्यकर्ताको सुराकी, हत्या, अपहरण र यातनामा संलग्न रहेको पाइएमा, जिल्ला जनसुरक्षा विभागलाई जुनसुकै बेला पनि ‘इन्काउन्टर’ गर्न आदेश दिइएको छ’, चेतावनीपत्रमा उल्लेख छ।
कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक सुदिप गिरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भनिएका व्यक्ति प्रहरीको अनुसन्धान विभागमा कार्यरत भए नभएको भेरिफाइ गर्नुपर्ने बताए। ‘सेना र प्रहरीमाथि आक्रमण नगर्ने भन्ने उहाँहरूको केन्द्रीय नीति सुनेका छौँ’, उनले भने, ‘तल्लो तहमा यस्ता गतिविधि हुन्छन् भने उहाँहरूकै पार्टीभित्र विरोधाभाष देखिन्छ।’
ठूलो संख्यामा नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेका कारण विप्लव नेतृत्वको पार्टी अत्तालिएको र टेलिफोनका टावरमा आक्रमण गर्नेदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि यस्ता हर्कतमा उत्रिएको हुन सक्ने उनले प्रतिक्रिया दिए। नागरिकको सुरक्षामा प्रहरी प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई छ।
विप्लवका दुई कार्यकर्ता तनहुँबाट पक्राउ
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका दुईजना कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । बिहिबार राति घिरिङमा एनसेलको टावरमा आगजनी गरेको भोलिपल्टै शुक्रबार राति विप्लवका कार्यकर्ता पक्राउ परेका हुन् ।
आँबुखैरेनी–३ बाट जिल्ला कमिटी सदस्य गणेश थापा क्षेत्री र घिरिङ–२ बाट एरिया कमिटी सदस्य धनबहादुर रानालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
तनहुँ प्रहरीले हालसम्म विप्लवका झण्डै एक दर्जन नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिसकेको छ । पछिल्लो समय तनहुँमा पनि विप्लवका कार्यकर्तामाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको छ ।
नेकपाले भने शान्तिपूर्ण रुपमा बसिरहेका बेला नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्ने गरेको जिकिर गरेको छ । पार्टीका जिल्ला ईन्चार्ज पूर्णजीत पुनले आफ्ना कार्यकर्तालाई फसाउन गलत आरोपमा पक्रने काम भइरहेको बताए ।
विप्लव समूहका पोलिटब्यूरो सदस्य भन्छन् : वार्ताको विकल्प छैन
काठमाडौं : नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’समूहका पोलिटब्यूरो सदस्य मोहन कार्कीले सरकार र आफ्नो पार्टीबीच वार्ताको विकल्प नभएको बताएका छन्।
महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमासँग कुरा गर्दै कार्कीले देश द्वन्द्वमा जाँदा कसैलाई फाइदा नपुग्ने भएकाले शान्तिपूर्ण रुपमै समस्याको समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दियो।
उनले आफू वार्ताको पक्षमा रहेको र वार्ताकै लागि विभिन्न सम्पर्कसूत्रमार्फत प्रयास गर्दैगर्दा पक्राउ परेको जानकारी दिए। वार्ताका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्ति भएको र छापामार युद्ध नरहेको जिकिर गरे। ‘एकीकृत जनक्रान्ति भनेको किसान, मजदुर, मध्यमवर्ग र राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गलाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाउने र जनआन्दोलन सञ्चालन गर्ने हो’ उनले भने, ‘कतिपय साथीहरुले त्यसलाई नबुझेर छापामार युद्धतिर लैजाने प्रयत्न गरिराख्नुभएको छ।’
आफूले पार्टीका महासचिव चन्दलाई समेत पार्टीमा केही कुरा सच्याउन र कार्यदिशाअनुसार शहरका मध्यम वर्गको साथ लिएर जनतालाई राहत दिने सुझाव दिएको बताए।
उनले राष्ट्रिय जागरण फैलाउने अभियान गर्नुपर्ने समेत बताए। उनले आफ्नो समूहको केही कमजोरी भएको स्वीकार गरे।
चन्द समूहले सञ्चालन गरेको विध्वंसात्मक घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा उनलाई गत चैत १ गते ललितपुरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। रासस
दशैँको अग्रिम टिकट बुकिङ कहिलेबाट खुल्छ ? हेर्नुस
Posted on September 26, 2020 Author Rapti Khabar
असोज १०, काठमाडौँ । लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक यातायातले दशैँका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ कात्तिक लागेपछि मात्र खुलाउने भएको छन् । हाल अधिकांश मानिसले काठमाडौँ उपत्यका छाडिसकेकाले हतार गर्नु नपर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ । कलेज तथा विद्यालय पनि खुला नभएकाले निकै कम विद्यार्थी मात्र काठमाडौँमा रहेकाले ढिलो गरी खुलाए पनि […]
Uncategorized पत्रपत्रिका रोचक
बाँदरको हातमा नरिवल: जनताको करबाट जनप्रतिनिधिको ‘दारु पार्टी’ (भिडियो)
Posted on July 11, 2019 Author Rapti Khabar
असार २६, दमौली । पछिल्लो समय व्यास नगरपालिकाको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। उक्त भिडियोमा ३१ औं नगरसभाको निर्णय सार्वजनिक गर्न व्यास नगरपालिकाद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन सकिएलगत्तै नगर प्रमुखसहित नगरसभा सदस्य मदिरा सेवन गर्दै नाचेको प्रष्ट देखिन्छ। ब्यानर नै प्रष्ट रुपमा देखिने गरी आएको भिडियोमा नगर प्रमुख केही सदस्यसँग नाचगानमा मस्त देखिन्छन्, पवन […]
नेपाल आउन प्लेन चढ्न आएका १७ नेपाली युएई एयरपोर्टमै किन अड्किए ?
Posted on August 31, 2020 Author Rapti Khabar
तुलसी सुवेदी/अन्नपुर्ण पोष्ट भदौ १५, काठमाडौं : भिसा समय अवधि सकिएका १७ जना नेपाली जरिवाना तिर्न नसकेर उतै अड्किएका छन्। नेपाल एयरलाइन्सको चार्टर्ड उडानबाट नेपाल आउन लागेका नेपाली भिसा सकिए पछिको जरिवाना तिर्न नसकेर एयरपोर्टमै अड्किएका हुन्। कोरोना भाइरस(कोभिड १९) सक्रमणबाट रोजगारी गुमाएर फर्किन बाध्य भएका १७ जना कामदारलाई त्यहाँको अध्यागमनले रोकेपछि हैरानीमा परेका छन्। […]
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ सिजन २, साउन ३१ गते बाट प्रशारण हुने
रामेछापको वडा कार्यालयमा सिलिण्डर बम विस्फोट